Gov’t, ethnic negotiators hopeful of breaking impasse in August talks
news The Global New Light of Myanmar, 29 Jul 2015 (6 years ago )
Yangon, 25 July — The government and ethnic armed groups expressed optimism Saturday about breaking an impasse onadraft national ceasefire deal at the next round of talks, despite holding different views on the number of signatories to the truce deal. Government and ethnic negotiators the previ...
news DVB, 03 Aug 2015 (6 years ago )
Mae Pa, Thailand – The UN’s refugee agency unveiledadraft plan this week detailing how to carry out the voluntary repatriation of 110,000 refugees residing in Thailand’s camps, drawing mixed reactions from camp leaders. Thailand currently has more than 110,000 refugees from Burma residing in ni...
Burmese consul: Opening of new border crossings will come after NCA signing
news Shan Herald Agency for News, 26 Aug 2015 (6 years ago )
Speaking to business, academic and administrative representatives from4northern provinces on Saturday, 22 August, the head of the newly established consulate general of Burma said Naypyitaw would consider opening new border checkpoints only after the Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) has been s...
သမ္မတ၊ ကာချုပ်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်များတွေ့ဆုံရန်ရက်မသတ်မှတ်နိုင်သေး
news Independent Mon New Agency, 27 Aug 2015 (6 years ago )
တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးရန်အတွက်နိုင်ငံ တော်သမ္မတ ၊တပ်မ တော်ကာကွယ်ရေးစစ်ဦးစီးချုပ်နှင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိပ်သီးခေါင်းဆောင် များနေပြည်တော်၌တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ရက်မသတ်မှတ်နိုင်သေးကြောင်းသိရသည်။ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ MPC ၏ညှိနှိုင်းချက်...
news DVB, 28 Aug 2015 (6 years ago )
ဖဲမုၢ်တနံၤလၢမုၢ်အတၢ်ကိၢ်ဟဲဆဲးဖျိလီၤဝဲဒၣ်ဆူဒဲဝၣ်ဖိအပဲတြီလၢဘၣ်အိးထီၣ်အီၤအံၤဖဲန့ၣ်အကတီၢ်နီၢ်စိဒိၡိဒိၣ်ဟ့ၢ်ကွၢ်ပဝဲသ့ၣ်တ ဖၣ်တၢ်ဂီၤလၢအဝဲတၢ်အပူၤတၢ်မၤလၢအဝဲမၤတ့ၢ်ဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.ကဆီဒီးထိၣ်တၤမံၤတၢ်ဂီၤအိၣ်လၢလီၢ်မံဒါဒီးခိၣ်ဖၢၣ်အလိၤဒီး ဟါတၢ်အီၣ်အစီၤနီၣ်ခိၣ်အဃံလၤလၢအိၣ်ဒီးဖီဖိသ့ၣ်တဖၣ်အါကလုာ်လၢထုးန့ၢ်ပှၤသး(မ့...
news Radio Free Asia, 09 Sep 2015 (6 years ago )
Talks held between Myanmar’s President Thein Sein and leaders of the country’s armed ethnic groups Wednesday ended withatentative agreement to signanationwide cease-fire agreement (NCA) next month, according to sources and state media. Hla Maung Shwe, senior advisor of the government-affiliat...
news Burma News International, 16 Sep 2015 (6 years ago )
news Democratic Voice of Burma, 08 Sep 2015 (6 years ago )
မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်သည်မနက်ဖြန်တွင်တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပြီးထိုတွေ့ဆုံဆွေး နွေးမှုသည်အနာဂတ်ကိုပုံဖော်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။သို့သော်လည်းအရေးပါသည့်အကြောင်းအရာကိစ္စအချို့သည်မဖြေရှင်းနိုင် သေး(သို့)မသေချာသေးပဲကျန်ရှိနေသည်။ တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆွေးနွေ...
news The Irrawaddy, 29 Sep 2015 (6 years ago )
RANGOON — Tens of thousands of people are set to lose the chance to vote in Karen State this November, after election officials said that polling stations would not open in some villages due to security concerns. Kyaw Kyaw Htun, an officer of the Union Election Commission (UEC) in state capital H...